कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: सहिद दिवसको उपलक्ष्यमा इसासद्वारा सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली
सहिद दिवसको उपलक्ष्यमा इसासद्वारा सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली
इन्द्रयणी सांस्कृतिक समाज (इसास) कीर्तिपुले हिजो सहिद दिवसको उपलक्ष्यमा श्रद्धाञ्जी कार्यक्रम गरियो ।
इसास कीर्तिपुरका अध्यक्ष वीरप्रसाद भन्सारीको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रा. माणिकलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । सहिदहरु गंगालला श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दको तस्वीरमा खादा ओढाएर एक मिनेट मौन धारण गरि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो । कलाकारहरु गुजे मालाकार, वीरप्रसाद भन्सारी, मिना महर्जन, प्रमिला महर्जन, रानीशोभा महर्जन र दिपा महर्जनले श्रद्धाञ्जली गित र सहिद सम्वन्धी गितहरु प्रस्तूत गरिएको थियो । तबलामा न्हुच्छे दर्शनधारीले साथ दिएको थियो ।
स्वागत मन्तब्य इसास कीर्तिपुरका उपाध्यक्ष दिलिप महर्जनले दिनु भएको थियो । उक्त अवसरमा रामभक्त महर्जन ‘रमझम’, अर्जुन नेपाःमि र दिलिप महर्जनले कविता वाचन गर्नु भएको थियो । ‘सहिद भनेको देश र जनताको भलाइको लागि एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ आफ्नो जीवनको बलिदान दिनेलाई सहिद भन्ने हो ।’ प्रमुख अतिथि प्रा. माणिकलाल श्रेष्ठले भन्नु भयो ‘सहिदको वलिदानलाई पैशाले मोलतोक्दैन । तर आजकाल सहिदको मोल रु दश लाख तोकेर सहिदको उपहास गरिरहेको छ ।’
कार्यक्रम संचालन अशोक भन्सारीले गर्नु भएको थियो ।